🥇 ▷ Adidas waxay soo bandhigaysaa telefishankeeda casriga ah ee cusub oo leh naqshad gaar ah oo loogu talagalay ciyaartooyda ✅
Adidas waxay soo bandhigaysaa telefishankeeda casriga ah ee cusub oo leh naqshad gaar ah oo loogu talagalay ciyaartooyda
Maaddaama qof walba uu u muuqdo inuu sameynayo sameecadaha aaladda wireless-ka ah qaab nololeed firfircoon maalmahan, maxaa astaan ​​u heellan isboorti sida Adidas looga tagi doonaa? Khadka maqalka ee cusub ee shirkadda ayaa ku dhawaaqay inay ku beegan tahay IFA Sannadkan magaalada Berlin waxay raadinaysaa inay saxdo xaaladdaas.
Qalabka dhagaha ee Adidas waa urur ka dhexeeya Adidas iyo Kala Soco Warshadaha, iyo alaabooyinkeedii ugu horreeyayba waa laba taleefoon-gacmeed bilaawe ah oo si toos ah loogu talagalay ciyaartooyda iyo dhammaan kuwa dareemaya inuu xiriir la leeyahay adduunka isboorti. The FWD-01 waa labo ka mid ah taleefoonnada gacanta ee wireless-ka ah oo qoorta ku wareegsan oo lagu qiimeyn lahaa 149 euro iyo RPT-01 Waa setel wireless ah oo caadi ah oo u qalmi lahaa 169 euro.
Hab-nololeedka Motorola wuxuu soo bandhigayaa teleefannadiisa cusub iyo kuwa ku hadla aflagaaddo Wireless ah
Labada taleefoon gacmeedku waxay ahaayeen la-qaabeeyey by ciyaartooyda sida laga soo xigtay Adidas, u eg mid aad u eg kabaha astaamo la mid ah, the Adidas Yeezy iyada oo siineysa ciyaar aad u isboorti oo taabasho gaar ah leh. In kasta oo telefishanka bilaa-waayirka ah ee FWD-01 uu u muuqdo moodooyin badan oo la mid ah suuqa, marka laga reebo fiilada isku xirka ee leh shebeel bir ah oo daboolaya fiilooyinka, ayaa ah dhagaha RPT-01 ee dhagaha gaar ahaan caan ku ah. Helitaanka makarafoonnada loogu talagalay in lagu tababaro waa a raashin. Dad badan ayaa adeegsada dhegaha Qolka jimicsiga, oo ay ka reebban yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha ka reeban, guud ahaan dhididku uma adkaystaan. RPT-01, dhinaca kale, waa la kala saaray IPX4, sidaa darteed waxay si fudud uga hor tagi doonaan nooca qoyaan ee tababarka adag uu abuuri karo. Xirmooyinka dhegaha iyo daboolka madaxa waa kuwo laga saari karo oo la dhaqi karo, taasoo micnaheedu yahay markii ay bilaabaan inay urin xun, waxaad wax ka qaban kartaa.
Ka sakow awoodda ay u leedahay inay wax ka qabato howlaha adag, RPT-01 waxay bixisaa nolol batari aad u fiican gudaha 40 saacadood waana lagu soo oogi karaa si deg deg ah adigoo adeegsanaya USB-C. Madaxa duubku waa mid aad u dabacsan, oo gacan ka geysan lahaa in lagu qaado meelkasta oo ay ku jiraan bacda jimicsigaaga.
FWD-01 waxay leedahay 16 saacadood Waqtiga kor u kaca Waxaa lagu rakibay qalab badan oo kala geddisan si ay kaaga caawiyaan inaad sifiican uhesho, isla markaana haysato isku mid ah karti la’aan ka badan RPT-01. Labada moodal ayaa adeegsada Bluetooth 5.0, laakiin Adidas ma shaacinin koddoomiska Bluetooth-ka ee ku habboon. Codsi dhammaystir ah oo bilaash ah ayaa ku siinaya qaar ka mid ah xulashooyinka is-beddelka, laakiin mar labaad, weli ma jiraan faahfaahinno ku saabsan nooca is-beddelka suurtagalka ah. Labada moodal waxay taageeraan howlaha taleefanka sida helitaanka wicitaanada, laakiin suurtagalnimada helitaanka kaaliyeyaasha codka sida Google Assistant, Siri ama Alexa, taas oo ah wax hadda soo bandhigaya tiro sii kordhaysa oo dhegaha iyo qalabka dhagaha dhagta ee diyaar u ah jimicsiga.
Audio Technica waxay wajiga ka hor imaaneysaa AirPods: kani waa madijiyaha Bluetooth-ga oo leh 45 saacadood nolosha batteriga